Akpaka mpempe akwụkwọ Manufacturers, Suppliers - China Automatic Plastic mpempe akwụkwọ Factory
New Type CNC sheetgha mpempe akwụkwọ ịgbado ọkụ igwe
Ngwa na Njirimara 1. elddị ịgbado ọkụ: weld na ntanetị na-agbagharị. PLC aka-panel akara usoro, ike na-akpaghị aka ukpụhọde kpo oku okpomọkụ, oge na nsogbu dị ka kwa nke ihe n'okpuru nhazi., Adabara weld na inyefe thermoplastic efere mere nke HDPE, eyi, ịkwanyere, PVDF, PPN, PPH 2.Control system Siemens PLC, 7-inch agba ihuenyo mmetụ-Siemens. 3.Brand-ọhụrụ ike etiti, ukwuu pụrụ ịdabere na nnyefe usoro, mụ na ọrụ na elu m ...
Ngwa na atụmatụ SUD-BO1530 nwere arụmọrụ siri ike na arụmọrụ dị mma, dị mfe iji, sie ike ma sie ike. Ọ na-etinyere ọtụtụ ke osisi, mgbasa ozi, ịkwanyere, Pee, eyi, PPH, acrylic, aluminum plastic efere wdg 1.Adopt oké ọrụ igwe etiti, akpụ site CNC planer-ụdị-egwe ọka igwe, ọzọ siri ike, kwụsie ike. 2.High ziri ezi Taiwan linear ndu, elu ziri ezi helical ghari ogbe mgbasa. Nkwụsi ike karị, nkenke dị elu. 3.Ebawanye na-akwado etiti, hụ nnyefe stabil ...
Automatic plastic mpempe akwụkwọ ọnwụ igwe
Ngwa na Njirimara 1.Unique-kpamkpam-nchọ ọnwụ, mma ma dị ọcha. 2. Ike nke na-agbanwezi ọsọ ọsọ ọsọ dịka ihe dị iche iche, dị mfe ma dị mma na arụ ọrụ. 3.Unique akpaka ihicha na dedusting usoro, huu ájá na-amịpụtara troroughly, ịcha na-adị mfe na shavings na-anakọtara nke ọma; 4. Ihu usoro ihe mmetụta ihu na n’azụ, na-eme ngwa ngwa ma zie ezi na nhazi; 5.Saw agụba obi jụrụ usoro, idozi jamming na-akwụsị ọnọdụ ...
Automatic plastic mpempe akwụkwọ butt fusion Rolling na ekwe igwe
Ngwa na Wdị ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ: weld weld na rolling. PLC njikwa njikwa njikwa aka, nke nwere ike idozi ihe ọkụkụ, oge na nrụgide na-akpaghị aka dịka akụkụ nke ihe eji arụ ọrụ. Control usoro Siemens PLC, 7-anụ ọhịa agba ihuenyo mmetụ ihuenyo-Siemens. Ike-ọhụrụ ike etiti, ukwuu pụrụ ịdabere na nnyefe usoro, mụ na ọrụ na elu ịrụ ...
Automatic plastic mpempe akwụkwọ butt anọ na igwe
Automatic plastic mpempe akwụkwọ ekwe igwe
Ngwa na ụdị ịgbado ọkụ dị iche iche: ịgbanye mpempe akwụkwọ plastik site na 0-145 Celsius. PLC njikwa njikwa njikwa aka, nke nwere ike idozi ihe ọkụkụ, oge na nrụgide na-akpaghị aka dịka akụkụ nke ihe eji arụ ọrụ. Control usoro Siemens PLC, 7-anụ ọhịa agba ihuenyo mmetụ ihuenyo-Siemens. Ike-ọhụrụ ike etiti, ukwuu pụrụ ịdabere na nnyefe usoro, mụ na ọrụ na elu na perfor ...